Shaambo Eyga oo Guriga Lagu Sameeyo: 4 DIY oo Cunto ah oo laga helo Caruur Ey - Caafimaadka
Waxaad ku dhex socotaa dukaanka xayawaanka, waxaad la kulantay soo bandhig shaambooyo ey: shaambo loogu talagalay maqaarka eeyga xasaasiga ah, shaambo dabiici ah iyo shaambo eeyaha wasakhda ah; halkee ka bilawdaa
toon dib u qodid , si aad u doorato shaambo eeyaha wasakhda ah oo aad akhrido sumadda.
Qaybta dambe ee maskaxdaada, waxaad ku bilaabaysaa inaad ka fikirto qoraalada aad ka aqrisay baraha bulshada ee ku saabsan sida phthalates iyo parabens (kuwa ku darsaday walxaha ilaaliya iyo hagaajinta cimri dherer) waxyeello u leh caafimaadka eyga iyo deegaanka.
Markaa waxaad arkaysaa sumadda qiimaha.
Nasiib wanaag, waxaan soo uruurinay afar ka mid ah cuntada ugu caansan uguna badbaado badan ee loogu talagalay shaamboo eyga guryaha lagu sameeyo.
Dhammaan cuntooyinka waxay adeegsadaan maaddooyin aad ku heleyso gurigaaga agtiisa, sidaas darteed qiimuhu si weyn ayuu u hooseeyaa waxaadna ogaan doontaa sida saxda ah ee aad gelineyso.
Eyga waa in aan la maydhin ugu badnaan laba jeer saddexdii biloodba.
Shampoo Eyga Eyga Ugu Fiican
Shaambo Eyga oo Guriga lagu Sameeyo oo Saliid Qumbaha lagu sameeyay
Waxay kufiican tahay Eyda maqaarka xasaasiga ah ama cuncunka leh
Shaambo Boorashka Cunnada Guriga Lagu Sameeyo
Shaambada Qiimaha Ugu Fiican
Shaambo Eyga oo Guriga lagu Sameeyo oo loogu talagalay Maqaarka Xasaasiga ah
Shaambo qoto dheer oo lagu nadiifiyo eeyaha leh boogta iyo shilka
Shaambo Eyga oo Guriga lagu Sameeyo oo leh Subaxa hore
Tilmaamaha haasaawaha eeyga (Muhiimadda iyo Joogtaynta)
Sida loo Guursado Ey
Marka ugu horeysa liiskayaga cuntada ee DIY Dog Shampoo waa saliidda qumbaha.
Waan ognahay in qumbaha uu leeyahay faa iidooyin dhan oo Fido ah, laakiin saliida sidoo kale waxay noqon kartaa qoyaan sare marka lagu daro shaambo.
Koob saabuun qaali ah
¾ koob biyo nadiifa ah
Koob saliid qumbaha
5 dhibcood oo saliid ah (sida saliida lagama maarmaanka ah)
Weelka dhalada ah ama dhalada, ku dar maaddooyinka oo si fiican isku walaaq ama rux si aad isugu darsato. Lather Fido oo si fiican u biyo raaci. Ku celi haddii loo baahdo .
Xusuusnow inaad isticmaasho saliidaha lagama maarmaanka ah eeyaha leh duruufo caafimaad horay u jiray weligoodna ha isticmaalin saliidaha lagama maarmaanka ah leh xaamilo ama nuujin nuujin ah ama eeyo.
Had iyo jeer waad isku qasan kartaa cuntadan adigoon saliida muhiimka ah lahayn. La hadal dhakhtarkaaga xoolaha haddii aad wax welwel ah ka qabto isticmaalka saliidaha muhiimka ah eeygaaga.
Shaambooga eyga lagu sameeyo ee guriga lagu sameeyo waxaa hubaal ah inuu ka tagayo Fido dareenkiisa iyo urtiisa cusub.
Shaambo Ey ah oo ku habboon eyda maqaarka xasaasiga ah leh; oatmeal waa nadiifiye dabiici ah, kaydiyayaal iyo qoyaan-qoyaan.
Waxay sidoo kale dejisaa oo u dhaqantaa sidii anti-bararka. Boorashka waxaa loo isticmaali jiray tobanaan sano ilaa deji cuncun iyo maqaar cuncun leh .
Soodhaha soodhada ayaa sidoo kale loo isticmaalaa cuntadani iyada oo ah mid baabi'isa ur aad u weyn, markaa uma baahnid inaad ka walwasho inayan caraf halkan ku soo kordhin!
1 koob oo boorash ah (oo lagu dhex daray budo fiican)
1 koob oo soodhaha ah
4 koob oo biyo diirran
Isku dar oo isku dar walxaha isku wada jira weelka wax lagu dubo.
Qaado koollada oo ku xoq jaakadda Fido. Tani ma dhafan doonto sida dukaanka la iibsaday ama cuntooyinka kale ee DIY.
U daa inaad ku qoyso 5-10 daqiiqo ka dibna si fiican u biyo raaci (ku celi haddii loo baahdo).
Xusuusnow in saxaradaadu aysan cunayn wax soodhaha leh maadaama tani ay sun ku noqon karto tiro badan.
Cunto kale oo loogu talagalay maqaarka xasaasiga ah, Aloe Vera waa caan maqaarka dejiya .
Waxaad u badan tahay inaad isticmaashay qorrax ka dib oo ay ku jirto maaddada ugu horreysa.
Aloe Vera waxaa ku jira laba hoormoon auxin iyo gibberellins kuwaas oo taageera bogsashada boogta isla markaana yareeya bararka, sidoo kale waa a guriga tamarta fiitamiinada iyo asiidhyada amino ee leh astaamaha anti-bararka iyo bakteeriyada ka hortagga.
Glycerine waa caan-yaqaan caan ah taas oo macnaheedu yahay inay ku xiran tahay qoyaanka.
1 quart oo biyo ah
1 koob shaamboo ilmaha ah
1 koob oo khal khal khal ah
1/3 koob glycerine
2 qaado oo Aloe Vera gel
Isku qas maaddooyinka isla markaana xumbay, xumbadu waa inaysan ka badnaan laba daqiiqo.
Si fiican u biyo raaci oo ku celi haddii loo baahdo.
Khamriga khalka ah ayaa siin doona eey kasta oo naqshadeeye ah dhalaal damac leh!
Shaambo nadiif ah oo qoto dheer, cuntadan shaambada eeyga ah ee guriga lagu sameeyo ayaa adeegsata dariiqyada guryaha badan; Dawada subaxa
Tani sidoo kale waa shaambo boodh wanaagsan - Dawn wuxuu caan ku yahay dilida boodadaas xunxun.
1 koob waaberi
Si wanaagsan isku walaaq oo lakulum Fido. U daa inaad ku qoyso 5-10 daqiiqo; tani waxay siineysaa waqtiga saabuunta lagu dhaqo boodadaas. Si fiican u biyo raaci oo ku celi.
Hubso inaad si buuxda uga maydheen shaamboogan shaarka Fido maadaama aadan rabin inuu si kama 'ah u cuno wasakhda hadhay ee dhogorta ku jirta!
Laguguma talin inaad u isticmaasho saabuunta dharka lagu dhaqo (ie, waaberiga) xayawaankaaga si joogto ah maadaama ay qallajiso maqaarkooda. Sidoo kale, iska ilaali isticmaalka haddii aad ka walwalsan tahay in eeygaaga uu leeyahay infekshin maqaarka ah. Raadi talobixin dhakhtarka xoolaha ah haddii aad ka walaacsan tahay maqaarka eeygaaga ama inuu leeyahay bahal faqash ah.
Sida had iyo jeer ah, ka hor intaadan u isticmaalin shaamboo eyga guryaha lagu sameeyo oo dhan saaxiibkaa aaminka ah, codso aag yar oo fiiri wixii falcelin ah; casaan maqaarka, cuncun iwm ... Isla markiiba ka bixi haddii aad yeelato.
Maydhashada kaliya maahan qeyb muhiim ah oo ka mid ah hagaajinta Fido, cadayashada sidoo kale, sidoo kale hubinta indhaha, dhagaha iyo ciddiyaha. Laakiin sababta? Aynu eegno.
Haddii si habboon loo soo bandhigo sida eey, eeyaha badankood waxay u dulqaadan doonaan is qurxin joogto ah.
Maydhashada joogtada ah waxay ilaalisaa jubbadaha wuxuuna yareeyaa dander ; Tani waxay si gaar ah faa'iido ugu leedahay kuwa xasaasiyadda qaba. Hubso inaadan bad qabin maadaama tani timo timo saliidaheeda dabiiciga ah oo qalajiso.
Cadayashada joogtada ah waxay hubisaa in timaha dhintay aysan ku dhicin; gaar ahaan loogu talagalay eeyo leh jaakad jilicsan . Cadayashada joogtada ahi waxay ka hortagtaa jaantusyada u horseedi kara xanuun iyo raaxo la’aan Fido, gaar ahaan kuwa ka hooseeya dhagihiisa ama godadka gacanta!
Tani waxay awood u siineysaa wareegga hawada, iyadoo gacan ka geysaneysa caafimaadka maqaarka iyo xakameynta heerkulka jirka. Waan ognahay taas eeyaha u hammuun qaboojiyaan , laakiin jaakadaha la saameeyay waxay gacan ka geysan karaan kuleylka.
Cadayashada sidoo kale waxay kordhisaa wareegga dhiigga , oo la mid ah cadayga qallalan ee bini-aadamka, taas oo ka qayb qaadata caafimaadka maqaarka iyo timaha.
Qabo eeygu wuxuu ku xirnaan doonaa noocooda, si kastaba ha noqotee, hal shay oo aad ku kalsoonaan karto ayaa ah xannibaadda boosta ay ku dhegan yihiin!
Hadduu yahay mid laba jibbaaran sida orsada Ruushka , qaadku wuxuu noqon doonaa aaladda ugu horreysa sanduuqaaga.
Tani waxay si fudud ugu cadayan doontaa timahiisa ilaaliyaha ah ee qallafsan waxayna ka saari doontaa wax kasta oo ka hooseeya dharka ay wax ku yeeshaan. Noocyo laba jibbaaran ayaa loo baahan yahay 2-3 buraash asbuucii iyada oo qubeys aan ka badnayn 2-3dii biloodba mar.
Koofi Gaaban Gaaban
Haddii Fido uu leeyahay gaaban, jaakad duuduuban sida Havapoo ah , waxay u badan tahay inaad booqato hagaajiye 6-12-dii toddobaadba mar si aad uga hesho goos gooska caadiga ah.
Tan waxaa u sii dheer, jaakadaha nooca poodle-ka curly ah ayaa si fudud u matoobi kara mooyee in maalin walba la cadaydo mooyee. Shanlada birta ah ayaa halkaan ka noqon doonta aaladda ganacsigaaga, tani waxay xaqiijinaysaa inaadan ka maqnaan guntin kasta oo u beddeli kara jaantusyo.
Jaakad cufan, sida Silver Labrador , sidoo kale waxay ubaahantahay cadayasho joogto ah, ugufiican 2-3 jeer usbuucii.
Burushka caagga ah ee curyaamay ayaa kuu noqon doona badbaadiyahaaga halkan. Xadhkaha cinjirka ah ayaa xajinaya timaha oo ka bixinaya. Sida noocyada labanlaabmay ee labanlaabmay, nimankani uma baahna maydhasho xad dhaaf ah maadaama ay jaakad ka dhigayso jaakaddooda saliidaha dabiiciga ah.
Ka bilow baabacooda, iskuna shanlee qaybaha yar yar. Haddii aad la kulanto gunti, isticmaal aaladda de-matting-ka si aad u goosato si aad uga saarto.
Fiiro gaar ah u yeelo madaxiisa (halka ay bini’aadamku ku ciyaaraan), dhagaha gadaashiisa iyo kilkilaha / gumaarka hoostiisa. Kala hadal muraayaddaada si aad u dejiso jadwal qurxin joogto ah oo ku habboon noloshaada.
Haddii Fido uu si joogto ah ugu ciyaaro kaynta ama meelaha dhiiqada leh, wuxuu u badan yahay inuu u baahan doono ballamo isdiyaarin oo joogto ah intii uu ku socon lahaa inta badan laamiga.
Hubi dhagahooda iyo indhahooda intaad cadayaysid ishana ku hay inta ay cidiyadoodu sii kordhayaan.
Sida had iyo jeer ah, haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid qurxinta saaxiibkaa aaminka ah, la hadal dhakhtarkaaga xoolaha ama ka raadso habeyn u qalma deegaankaaga.
Qurxinta Fido waa qayb muhiim ah oo ka mid ah daryeelkiisa maalinlaha ah, ha noqoto kormeeriddiisa, nadiifinta dhagaha ama indhaha, cadayashada ama maydhashada.
Cadayashada joogtada ahi waxay ka hortagtaa gunti iyo marooyin, waxay caawisaa wareegga waxayna gacan ka gaysataa hagaajinta heerkulka.
Qubaysku wuxuu nadiifiyaa jaakadaha oo wuxuu yareeyaa dander.
Suuqa shaamboo eyga wuxuu noqon karaa wax yar oo ka mid ah miinada miinada oo ay la socdaan badanaa kiimikooyin kuwaas oo gacan ka geysan kara caafimaad-darrada, sababtaas darteed waxaan isku soo dubaridnay afar cunto oo DIY ah oo guriga lagu sameeyo shaambo ey oo dhammaantood leh faa'iidooyin u gaar ah.
Had iyo jeer, ka feker maaddooyinka iyo haddii aadan hubin inaad u isticmaaleyso eygaaga, la hadal dhakhtarkaaga xoolaha.
Ma haysataa raashin aad rabto inaad wadaagto? Noo soo sheeg faallooyinka hoose.
Dalmatians: Baro sida loo yaqaan 'Firehouse Dog'
Isku dhafka pomeranian husky oo koray oo buuxa
magacyo adhijir Jarmal gabar wanaagsan
Isku darka adhijirka jarmalka husky oo koray
imisa ilig ayaa eey leeyihiin jaantuska
labrador retriever Jarmal Shepherd isku darka eygaaga